Safidim-bahoaka : TSY IJERENA TAVAN’OLONA ! -
AccueilRaharaham-pirenenaSafidim-bahoaka : TSY IJERENA TAVAN’OLONA !
Gazety mpanohana ny fitondrana ny Triatra ary tena manohana izao fitondrana izao tanteraka mihitsy no sady tsy miafina amin’izany rahateo koa. Tsy amin’ny maha Hery Rajaonarimampianina akory no hanohanan’ny gazety azy fa ny politikam-pampandrosoana napetraky ny filoha hanarenana ny firenena. Tsy afaka ny hijery arina an-tava noho izany tarigetra izany ny gazety ka hiray tsikombakomba amin’ny tompon’andraikitra tsy manaraka ny baiko sy ny toromarika avy amin’ny Filoha ho fiarovana ny safidim-bahoaka. Tsy mahita afa-tsy ny filoham-pirenena ny vahoaka, rariny loatra izany satria izy no nametrahany ny fitokisany sy ny safidiny. Noho izany, tokony hitandrina tahaka ny anakandriamaso izay safidim-bahoaka izay ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny amin’izay andraikitra nankinina taminy tsirairay avy ka tsy hijery afa-tsy ny tombontsoa ambonin’ny firenena.
Tsy afaka ny hitazam-potsiny manoloana ireo fihetsika sy paikady maloto hanakorontanana ny firenena ihany koa ny gazety noho izay fiarovana ny safidim-bahoaka izay ihany. Mazava ny safidim-bahoaka nanome ny fitokisany ho an’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina hitondra ny tany sy ny fanjakana tamin’ny alalan’ny fifidianana. Taonan’ny fananganana ity taona 2017 ity araka ny baikon’ny Filoha, hanomboka amin’ity taona ity avokoa ireo tetikasa sy fotodrafitrasa maro (ara-toekarena sy sosialy) taorian’ny famerenana ny fitokisan’izao tontolo izao izay nanidy varavarana tamin’i Madagasikara nandritra ny dimy taona vokatr’ireny fanonganam-panjakana teto ireny.
Mazava araka izany ny fomba fijerin’ny gazety manoloana ny toe-draharaham-pirenena. Tsy maintsy miteny sy milaza izay tsy mety ny gazety na ao anatiny izany na ivelan’ny fitondrana ho fiarovana ny safidim-bahoaka sy ny politikam-pampandrosoana efa napetraky ny filoham-pirenena hanarenana ity Tanindrazana iombonana ity. Izay no andraikitry ny mpanao gazety dia ny filazana ny zava-misy marina amin’ny vahoaka. Mitondra ny vina sy ny politikam-pampandrosoana ny filoham-pirenena ary mampita izany any amin’ireo mpanatanteraka isan-tsokajiny avy.
Haka ohatra mivantana avy hatrany isika. Tsy ny filoham-pirenena no ndeha handray basy sy “menotte” hisambotra ireo dahalo sy olon-dratsy fa efa misy tompon’andraikitra nankinana izany lafiny fandriam-pahalemana izany. Tsy ny Filoha no ndeha hisambotra sy hanao fanadihadiana ireo mpanao kolikoly fa efa misy ny rafitra manokana miady amin’izany kolikoly izany. Mamely mafy ny delestazy vokatry ny tsy fisian’ny orana ka mampihena ny famokarana herinaratra. Tsy maintsy mitombo araka izany ny filana eo amin’ny solika hampihodinana ireo milina mpamokatra herinaratra. Ny fiainam-bahoaka mihitsy no voatohintohina noho ny delestazy. Nandray ny andraikitra manoloana izany ve ireo tompon’andraikitra? Sarobidy ny safidim-bahoaka sy ny fiainam-pirenena ka tsy ijerena tavan’olona.